ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကြည်ညိုရတဲ့အကြောင်းပြချက် ၁၀ ခု | Shan News ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကြည်ညိုရတဲ့အကြောင်းပြချက် ၁၀ ခု
ကိုယ်က ဘာသာတစ်ရပ်ကို ယုံကြည်တယ်၊ အတွေးအခေါ်တစ်ရပ်ကို လက်ခံတယ်ဆိုရင် ဘာကြောင့် ဒီလို လက်ခံ ယုံကြည်ရလဲဆိုတဲ့ တွေးထားတဲ့အချင်းအရာ ပီပီပြင်ပြင် ရှိရလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ ဟောဒါတွေကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျနော် နှစ်သက်ကြည်ညိုရတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေပါ။
၁။ လူ့တန်ဘိုးကို အမြင့်ဆုံး အသိအမှတ်ပြုတဲ့ဘာသာဖြစ်လို့။
လူသားထဲကနေ လူသားမျိုးနွယ်စုအတွက် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဘာသာရေး အတွေးအခေါ် အားလုံးဟာ လူသားဗဟိုပြု စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်း ဖြစ်ရပါမယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဒီလို လူ့စွမ်းရည်ကို အမြင့်မားဆုံး တန်ဘိုး ထားတာ တွေ့ရတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအလိုအရ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ လွတ်မြောက်ခြင်းကို သူကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ မမြင်ရတဲ့ လက်တွေ့မကျတဲ့ ဘယ်တန်ခိုးရှင် ဘယ်စွမ်းအားရှင်ဆီကမှ အကူအညီတောင်းနေစရာ မလိုပါ။ ဒါဟာ သိပ္ပံပညာရဲ့ လက်တွေ့ တွေ့ရှိရချက်တွေနဲ့လည်း ကိုက်ညီနေတာ တွေ့ရတယ်။
ယနေ့အထိ သမိုင်းက သက်သေပြနေတာတော့ လူသားမျိုးနွယ်စု တိုးတက်လာရခြင်း၊ သတ္တလောကကို အုပ်စိုးလာခြင်းမှာ ဘယ်တန်ခိုးရှင် သိဒ္ဓိရှင်ကြောင့်မှ မဟုတ်ပါ။ လူသားတွေကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ခွန်ကိုယ့်အားနဲ့ ကြိုးစားလို့ချည်းပါပဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာအရ လူသားဟာ ဂုဏ်သိက္ခာအင်မတန်ရှိတယ်။ သံသရာက လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ဘယ်သူ့ကိုမှ အားကိုးနေစရာမလိုဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြောက်ရွံ့ချီးပနေစရာ မလိုဘူး။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး၊ ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်ရမယ်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်မှ ဖြစ်မယ်။ စကြ၀ဠာထဲက လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ နေရာကို ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အမြင့်ဆုံး မြှင့်တင်ပေးထားပါတယ်။
ဗုဒ္ဓက သူကိုယ်တိုင်ကိုပဲ တန်ခိုးရှင်တစ်ပါး ဒါမှမဟုတ် ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပါးနေရာမှာ ၀င်မယူလိုက်ဘူး။ ငါသည်လည်း သင်တို့လိုပဲ လူသားဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် အမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်ဆီရောက်ခဲ့တယ်။ သင်တို့သည်လည်း ကြိုးစားကြ။ ဒါဆို ငါ့လို ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဟော့ဒီမှာ ငါကြိုးစားခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေက ဒါတွေ ...။
ကဲ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်တဲ့ အယူအဆလည်းဗျာ။
၂။ လူ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အမြင့်ဆုံးလက္ခဏာကို ဖော်ပြထားတဲ့ ဘာသာဖြစ်လို့။
ဗုဒ္ဓကျမ်းစာတွေရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမှ သင်ဟာ တပါးသူကို သတ်ဖြတ်လော့ နှိပ်စက်က လူပြုလော့ နိုင်လို မင်းထက်ပြုလော့ ဆိုတာမျိုး အားပေးမှုကို တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
လူနဲ့ တိရိစ္ဆာန်ကွာခြားချက်ဟာ အရိုင်းစိတ်ပဲလို့ ထင်ပါတယ်။
ယဉ်ကျေးတဲ့လူဆိုတာ အဲဒီအရိုင်းစိတ်ကို ထိန်းကွပ်အောင်နိုင်သူ။ ဗုဒ္ဓဘာသာက ဒီလို အရိုင်းစိတ်ကို ထိန်းကွပ်အောင်နိုင်အောင် အပြည့်အ၀ သွန်သင်မှု ပြုထားပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကုသိုလ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ မကောင်းတာကို မလုပ်ခြင်းက လာတယ်။ ကိုယ်ကလွဲတဲ့ သူတပါးပေါ်မှာ စေတနာထားခြင်း စာနာစိတ်ထားခြင်းက လာတယ်။ကိုယ်ကလွဲတဲ့ သူတပါးဆိုတဲ့နေရာမှာ လူတင်မက သက်ရှိအားလုံးအပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ စာနာစိတ်ထားပါတယ်။ ဘယ်လို အရိုင်းစိတ်၊ သတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲလိုစိတ်ကိုမှ အားပေးအားမြောက်မလုပ်ပါ။
လူရဲ့ မူလအခြေခံဗီဇစိတ်ဖြစ်တဲ့ အရိုင်းစိတ်ကို ဘယ်လိုထွက်ပေါက်ပေးသလဲ။ စိတ်အတွင်းပိုင်းကို လှည့်ပြီးရှုတဲ့နည်းနဲ့ ထွက်ပေါက်ပေးတယ်။ စိတ်နဲ့ စိတ်ချင်းရင်ဆိုင်စေတယ်။ ကိုယ်ကိုယ့်ကို အောင်နိုင်သူသာ အမြတ်ဆုံးအောင်နိုင်သူအဖြစ် ဖော်ပြတယ်။
၃။ သဘောထားကြီးတဲ့ ဘာသာဖြစ်လို့။
ငါ့ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြ၊ ငါ့ဘာသာကို မကိုးကွယ်ရင် မယုံကြည်ရင် ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ် ... ဆိုတာမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဘယ်တော့မှ မဖော်ပြပါ။
ပြောရရင် ဘာသာခြားတွေကို ကျိန်စာတိုက်ထားတာမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ လုံးဝ မရှိ။
သူ့သင်ကြားချက်တွေကို ကြည့်တာနဲ့ပဲ ဗုဒ္ဓဟာ အင်မတန်သဘောထားပြည့်ဝသူ၊ လူကြီးလူကောင်း ဆန်လှသူဖြစ်ကြောင်း ထင်းထင်းကြီးပေါ်လွင်နေပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းဆိုတာက မယုံရပါ။ သူကိုယ်တိုင်ပြောရင် ချဲ့ကားပြောလို့ရသလို သူ့ရန်သူတွေက နှိမ့်ချ ပုံဖျက်လို့လဲ ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူ့ကို ကြည်ညိုသူတွေကပဲ အကြည်ညိုလွန်ပြီး ယုတ္တိမတန်တာတွေချီးမြောက်လွန်းလို့ ပုံပျက်သွားတာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စရိုက်ကိုကြည့်ချင်ရင် သူ့စကား၊ သူ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ ကြည့်ရပါမယ်။
ဗုဒ္ဓဟာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် နည်းနည်းဆို နည်းနည်းကလေးမှကို အထင်အမြင်လွဲစရာ မရှိပါ။ တကယ့်ကို အံ့သြဘနှမ်း လေးစားရလောက်တဲ့ စကားနဲ့ ကိုးစားရလောက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေချည်းပဲ သူ လုပ်ဆောင် ပြုမူခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ကိုးကွယ်ပါတယ်။
၄။ သဘောထားပြည့်ဝတဲ့ ဘာသာမို့လို့။
ဗုဒ္ဓဟာ ဘာသာခြားတွေအပေါ်မှာ သဘောထားကြီးခဲ့သလို ကိုယ့်ဘာသာဝင်တွေပေါ်မှာလဲ သဘောထားပြည့်ဝ မှုကို ပြသခဲ့ပြန်တယ်။
သူ့ကို ယုံကြည်လွန်းလို့ သူ့လက်အောက်ခိုဝင်လာသူတွေကိုတောင်မှ ကျေးကျွန်မပြုပါ။
ငါကို ကိုးကွယ်ကြ၊ ငါ့ကို ဆည်းကပ်ကြလို့ သူမလုပ်။
ငါပြောမယ်၊ ငါပြောတာ အမှန်၊ ငါပြောရင် ယုံရမယ်။ ဘာလို့ဆို ငါပြောတာမို့ ဆိုတာမျိုး သူမပြော။
လာလော့၊ ရှုလှည့်လော့၊ ဝေဖန်ဆန်းစစ်လော့ ဆိုတာမျိုပဲ သူပြောခဲ့တယ်။
သူ့တရားလည်း သူ ယုံတယ်။
မျက်စိမှိတ်ပြီး မကိုးကွယ်ခိုင်းဘူး။ မျက်စိဖွင့်ပြီး ဆန်းစစ်ခိုင်းတယ်။ ကျင့်ကြံခိုင်းတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ရမှာက
ကိုးကွယ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ လိုက်နာ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်တယ်။
ဗုဒ္ဓဟာ သူဆီ အဖူးအမျှော်လာသူတွေထက်
သူ့ဆီမလာပဲ တောထဲမှာ တရားအားထုတ်နေသူကို ပိုချီးမွှမ်းခဲ့တဲ့ သမိုင်းရှိတယ်။
သူ့ကို ပန်းကုံးတွေ စွပ်ပေးသူကို
ငါ့ကို ဒါတွေလာလုပ်နေလို့ ငါ နှစ်သက်မယ်ထင်သလား ငါ့တရားကို လိုက်နာကျင့်ကြံမှ ငါပိုနှစ်သက်တယ်လို့ ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်။
၅။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် (တနည်းပြောရင်) လူသားစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ဘာသာမို့။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလဲ စောင့်စည်းထိန်းချုပ်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။
အဲဒါကို သီလလို့ ခေါ်တယ်။ သီလကိုလည်း ချီးမွှမ်းခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ စောင့်စည်းထိန်းချုပ်ရခြင်း၊ လိုက်နာရခြင်းဟာ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိပ်စက်ကလူ ပြုခြင်းမဟုတ်သလို တပါးသူကို နှိပ်စက်ကလူပြုခြင်းလည်း မပါဝင်ဘူး။
တပါးသူဆိုတဲ့ နေရာမှာ တိရိစ္ဆာန်တွေလည်းပါပါတယ်။
အသက်ရှိတဲ့ တစ်စုံတရာကို နှိပ်စက်ကလူပြုခြင်းဟာ အရိုင်းစိတ်ကို အားပေးတာဖြစ်တယ်။ မငြိမ်းချမ်းဘူး။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းကို ဖော်ပြတယ်။ ဒီတော့ လောကကြီးလည်း မငြိမ်းချမ်းတော့ဘူးပေါ့။
ပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကို လုပ်စေချင်တာတွေကိုပဲ
သူများကို လုပ်ခိုင်းတယ်။ လုပ်ခွင့်ပြုတယ်။
လူ၊ တိရိစ္ဆာန် စတဲ့ သက်ရှိတစ်စုံတရာကို သတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲရင် သူ ဘယ်လိုနေမလဲ။ သူ့နေရာမှာ ကိုယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုနေမလဲ။ ဒါကို ဂရုမစိုက်ပဲ ဆက်လုပ်ရင် အတ္တဗဟိုပြုခြင်းဖြစ်သွားမယ်။ ဒါဆို တရားမျှတတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီး မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ တရားမျှတ ပြည့်ဝငြိမ်းချမ်းတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရာ အကောင်းဆုံး လမ်းညွှန် မှုတွေ ပေးထားပါတယ်။
၆။ မလိုအပ်တဲ့ ချုပ်တီးခြင်းတွေကို အားမပေးတဲ့ ဘာသာဖြစ်လို့။
လူ့ဘောင်မှာနေရင် လူသားတစ်ယောက်လို ပြုမူကျင့်ကြံရမယ်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းကို မထိခိုက်စေတဲ့၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် (သို့) တစ်ပါးသောသက်ရှိ တစ်စုံတရာကို မထိခိုက်စေတဲ့ ဘယ်အရာကို လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုမှ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ တားမြစ်ထားတာ မရှိဘူး။
လောက ကပေးထားတဲ့ လူ့စည်းစိမ်ကို ခံစားခွင့်ပြုတယ်။
၀ိသာခါကျောင်းအမကြီးဆိုတာ ရှိတယ်။ ကာမဂုဏ်ခံစားစဉ်မှာတောင် သရဏဂုံတည်လို့ ရတဲ့အကြောင်း သူ့ကို ဟောခဲ့တယ်။ ဆိုလိုတာက လူသားတွေရဲ့ သဘာဝချင်းရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သွေးသားလုပ်ဆောင်မှုတွေကို ယုတ်ညံ့တဲ့အရာလို့ မသတ်မှတ်ခဲ့ဘူး။ ဒါကို အပြစ်အဖြစ်လည်း မညွှန်ပြခဲ့ဘူး။
ဒါပေမဲ့ သွေးသားလုပ်ဆောင်မှုကို လိုအပ်တာထက် ခံစားခြင်းကိုတော့ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့ကံနဲ့ တားမြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ လွတ်မြောက်ရာအကျင့်ကို ကျင့်တဲ့အခါမှာတော့ ဒါကို ရှောင်ကြဉ်ခိုင်းခဲ့တယ်။ ဒါဟာ စိတ်လွတ်မြောက်ရေး ခရီးစဉ်မှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေလို့ဖြစ်တယ်။
အထူးသဖြင့် မလိုအပ်ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိပ်စက်ကလူဖြစ်စေတဲ့ အခြားဘယ်အရာကိုမှ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အားမပေးဘူး။ ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်က အဆုံးစွန် ချိုးခြံချွေတာခြင်းကို ကျင့်ကြံခဲ့ဖူးပြီး ဒါဟာ စိတ်လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ဘယ်လိုမှ အကျိုးမပြုနိုင်တဲ့အရာတွေမှန်း သိရှိရှောင်ခွာခဲ့တယ်။
၇။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အမှန်တရားကို ရှာဖွေနေတဲ့အစုအဖွဲ့ဖြစ်လို့။
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အမှန်တရားကို ရှာဖွေနေတဲ့အစုအဖွဲ့ဖြစ်တယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုတာ ... ကိုးကွယ်သူများ အစုအဖွဲ့မဟုတ်ဘူး။
မိမိအယူဝါဒကို လူသားမျိုးနွယ်စု အားလုံးပေါ်လွှမ်းမိုးဖို့ရာ အင်အားတစ်ခုအနေနဲ့ စုစည်းထားတာ မဟုတ်ဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ သာသနာပြုခြင်းဟာ နယ်ချဲ့ခြင်းမဟုတ်၊ အမှန်ကို သိစေလိုခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်က သူသိမြင်တဲ့ သစ္စာတရားကို လူတွေကို ပြန်ညွှန်ပြတယ်။ သူ ရရှိသွားတဲ့ လွတ်မြောက်ခြင်းကို လူတွေလည်း လိုက်လံနိုင်ဖို့ရာ လမ်းကို ညွှန်ပြတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။
အမှန်တရားဆိုတာ အားးလုံးနဲ့ ဆိုင်ပေမယ့်
အမှန်တရားကို သိရှိခြင်းဟာ တစ်သီးပုဂ္ဂလကိစ္စဖြစ်တယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ သစ္စာတရားဆီသွားတဲ့ လမ်းပဲ။
အင်မတန်ငြိမ်းချမ်းတယ်။ နိုင်လိုမင်းထက်ပြုခြင်း ကင်းတယ်။
၈။ တရားတွေ ဟောတဲ့ဘာသာဖြစ်လို့။
တစ်နည်းပြောရရင် သစ္စာတရားကို ညွှန်ပြတာဖြစ်တယ်။
ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် အတွေးအခေါ်ဒဿနတွေ သွန်သင်တဲ့ဘာသာဖြစ်တယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အရေးကြီးဆုံးကျမ်းစာတွေကို အဘိဓမ္မာလို့ ခေါ်တယ်။
အဲဒီ အဘိဓမ္မာကြောင့်ပဲ ကျနော်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရင်ကော့ခံယူခဲ့တာ။
ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခဆိုတာ ဘာလဲ?
ဆင်းရဲခြင်းက လွတ်မြောက်တဲ့ အကျင့်အကြံတွေက ဘာတွေလဲ?
တကယ့်အနှစ်သာရကို ပြောတယ်။ လွတ်မြောက်ခြင်းအလုပ်အတွက် လက်တွေ့ အသုံးချစရာတွေ ကို ပြောတယ်။
၉။ လူသားတွေရဲ့ အကျိုးအတွက် ဖြစ်တည်နေတဲ့ဘာသာဖြစ်လို့။
ဗုဒ္ဓရှိစဉ်ကပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အကြီးဆုံး သင်းခွဲမှု ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။
ဒေ၀ဒတ်ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ သွေးသားအရင်းက သစ္စာဖောက်ခဲ့တာပါ။
ဒီလို အဖွဲ့ခွဲထွက်သွားတဲ့သူတွေအပေါ် ဗုဒ္ဓရဲ့ သဘောထားက အင်မတန် အထင်ကြီး လေးစားစရာကောင်းခဲ့တယ်။ ငါ့သြဇာအောက်က ထွက်သွားရသလားဆိုပြီး ဖျက်လို ဖျက်ဆီး ပြုတာ မျိုးလုံးဝ မလုပ်ဘူး။
အမြင်မတူသူတွေပေါ် ပြန်စည်းရုံးခိုင်းတာတော့ ရှိတယ်။ ဒါကလဲ အဲဒီလူတွေ အကျိုးအတွက် ဖြစ်တယ်။
လက်ထောက်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလန်တို့ အဲဒီအုပ်စုကွဲတွေဆီ သွားမဖြောင့်ဖျခင်မှာ 'သူတို့ကို မသနားတော့ဘူးလား' ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်စကားဟာ အင်မတန် ကြက်သီး ထစရာကောင်းတယ်။ အဖွဲ့ခွဲသွားတာကို အပြစ်တစ်စက်မှ မမြင်ပဲ အယူအဆမှားတွေနောက် လိုက်တဲ့အတွက် သံသရာမှာ နစ်နာကြရတော့မယ့်အရေးကိုသာ တွေးတောသနားမှု ရှိခဲ့တယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ လွတ်မြောက်ခြင်းဆီ ရှေးရှုတဲ့ဘာသာဖြစ်သလိုမလွတ်မြောက်သေးသူတွေပေါ် သနားဂရုဏာ သက်ခြင်းသာ ရှိခဲ့တယ်။ဒါကမှ အမှန်။ ငါပြောတာမှ အမှန်။ အမှားတွေ ယုံနေရင် အပြစ်ပေးသင့်တယ်ဆိုတာမျိုး ကျဉ်းမြောင်းချုပ်ချယ်တဲ့သဘောထား ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ လုံးဝ မရှိဘူး။
၁၀။ အကြောက်တရားများ သွေးဆောင်မှုများ အားလုံးကလွတ်မြောက်တဲ့ဘာသာဖြစ်လို့။
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဘယ်အရာနဲ့မှ မဆွယ်သလို ဘယ်အရာနဲ့မှ မခြိမ်းခြောက်ထားဘူး။
ဒီဘ၀မှာ အနစ်နာခံပါ၊ နောက်ဘ၀ကျရင် အသာစံရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူး။
အဆုံးစွန်သော လွတ်မြောက်ရာကို ခုမျက်မှောက်ဘ၀မှာတင် ရနိုင်တယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မမြင်ရတဲ့ လက်တွေ့မကျတဲ့ ဘယ်အရာနဲ့မှ ဆွယ်ထားတာ မရှိဘူး။
တမလွန်မှာ နတ်သမီးလေးတွေနဲ့ နေရာဖို့အတွက်၊ ပျားရည်တွေ ချောင်းလိုစီးနေမယ့် တမလွန် ဘုံကို ရောက်ဖို့အတွက်၊ အခုဘ၀မှာ သူများအသက်တွေ သတ်စရာမလိုဘူး။
အခု ကောင်းကောင်းနေရင် နောက်ကို ကောင်းကောင်းဖြစ်မယ်။
အခု စိတ်ကောင်းထားရင် နောက်ကို အဖြစ်ကောင်းကြုံမယ်။
အခု ကောင်းကြောင်းလုပ်ရင် နောက်ကို ကောင်းကျိုးရမယ်။
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစစ်တွေဟာ ဘယ်တော့မှ အကြမ်းဖက်သမားဖြစ်မသွားနိုင်ဘူး။
အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို တကယ်သက်ဝင်ယုံကြည်သူမှန်ရင် ဘာသာရေးကြောင့် အကြမ်းဖက် သမား ဖြစ်သွားစရာကို မရှိဘူး။
ပြောရရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အကြောက်တရားအားလုံးက ကင်းလွတ်တယ်။
အကြောက်တရားနဲ့ မဆွယ်သလို အကြောက်တရားနဲ့ မကန့်သတ်ထားဘူး။
အရာတစ်ခုကို မလုပ်ရဘူးဆိုရင် မကောင်းတဲ့အရာမို့သာ ဖြစ်မယ်။ ဘယ်သူမလိုလားလို့မှ မလုပ်ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာဖြစ်မယ်။ ဆိုးတာ လုပ်ရင် ဆိုးတာဖြစ်မယ်။ ဒါ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရပဲ။ ကိုယ့်ကိုလုပ်တာ မကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကို တပါးသူကိုလည်း မလုပ်နဲ့။ အင်မတန်ရိုးရှင်းပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဘယ်မမြင်ရတဲ့ တန်ခိုးရှင်ရဲ့ နိုင်ငံတော်ဆိုတာမှ မရှိဘူး။
တမလွန်ဆိုတာ ရှိပေမယ့် အဲဒါကလဲ သင့်လုပ်ရပ်တွေရဲ့အကြောင်းကြောင့် ပေါ်ပေါ်လာမယ့် အကျိုး ရလာဒ်တွေသာ ဖြစ်တယ်။
မှတ်ချက် ။_______။ တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သတ်မှတ်မှုအရကြည့်ရင် ကျနော်ဟာ အနိမ့်ဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခု အဲဒီ အနိမ့်ဆုံးအဆင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လေးရဲ့ ယုံကြည် ရခြင်း အကြောင်းရင်းတွေကို ရေးပြလိုက်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘာသာခြားတွေ တိုက်ခိုက်လာတာတွေကို ဒီဖွဘုတ်ပေါ်မှာ တော်တော် များများတွေ့ရတယ်။
ပထမအချက် ဗုဒ္ဓလူ့ဘ၀က စည်းစိမ်ခံစားခဲ့တဲ့ကိစ္စ။ လွတ်မြောက်ရာလမ်းကို မကျင့်ကြံသေးခင်မှာ စည်းစိမ်ခံစားတာ ဘာဖြစ်သလဲလို့ ကျနော်ပြောလိုပါတယ်။ ဘုရားလို့ ကိုယ်ကိုယ်ကို သမုတ်အပြီးမှာ သူဟာ သူ့စကား သူ့တရားနဲ့အညီ နေထိုင်သွားခဲ့သူဖြစ်တယ်။
ဒုတိယအချက် ၀က်ပျိုသားစားပြီး ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့ကိစ္စ။ သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်တော်ရှင် အနေနဲ့ မြင်သားကြားသား မဟုတ်ဘူးလား စတဲ့ ခပ်ကြောင်ကြောင် ပုတ်ခတ်မှုတွေ လာပြန်တယ်။ ဗုဒ္ဓက လူဖြစ်ပါတယ်။ မဟာလူသားဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အတွက် ဆွမ်းကို ဘယ်လို ပြင်ဆင်နေပါလိမ့်လို့ အဘိညာဉ်ပွားပြီး လိုက်ကြည့်နေစရာ မလိုပါ။နောက်ပြီးတော့ ဒီလို အစားအသောက်ကိစ္စလောက်လေးကို ကလေးအထာနဲ့ လိုက်မငြင်းလိုပါ။ အတွေးအခေါ်ကိစ္စပြောရအောင်။ သူ့လို တလေးတနက် အတွေးအခေါ်တွေကို ဘယ်အရာကများ နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါမလဲ။
တတိယအချက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ရုပ်တုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာအဖြစ် ပုတ်ခတ်တာရှိတယ်။ ဗုဒ္ဓက ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းကို တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ မရှိတော့ကာစမှာတောင် ရုပ်တုထုလုပ်မကိုးကွယ်သေးပါ။ ကြာပန်းပုံ စကြာပုံတွေသာ အထိမ်းအမှတ်ပြု ကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အခု ရုပ်တုထုလုပ်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာလဲ အထိမ်းအမှတ်ပြုမှုပါပဲ။ အဲဒီ အရုပ်က အဓိကမကျပဲ ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ ဂုဏ်ရည်တွေ၊ ရုပ်တုရှင်ရဲ့ သင်ကြားမှုတွေကသာ အဓိက ကျပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အရေးကြီးဆုံးက ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု မဟုတ်ပါ။ လိုက်နာ ကျင့်ကြံမှုသာဖြစ်ပါတယ်။ လိုက်နာ ကျင့်ကြစရာတွေအကြောင်း သစ္စာတရားအကြောင်းကို ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ ၇ကျမ်း တိတိတောင် ရှိပါတယ်။